११ सुन्दर र निर्दोष छालाका लागि बीटरूट फेस प्याक - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
११ सुन्दर र निर्दोष छालाको लागि बीटरुट फेस प्याक
घर सुन्दरता छाला हेरचाह छाला केयर ओआई-मोनिका खजुरिया द्वारा मोनिका खजुरिया मार्च १,, २०२०
चुकन्दर यसको स्वास्थ्य लाभ को लागि प्रसिद्ध छ। यो राम्ररी pigmented सब्जी तपाईंको रगत शुद्ध र तपाईंको ऊर्जा बढाउने एक राम्रो तरिका हो। यद्यपि तपाईलाई थाहा छैन हुन सक्छ कि बीटरुट तपाईंको छालाको लागि चम्किरहेको कवचमा एक नाइट हो। एक्नेदेखि दाग र रिink्कहरूमा, चुकुनले प्रभावकारी रूपमा हाम्रो छालाको समस्याहरूसँग लड्न सक्छ।
दाया खुट्टा खुट्टामा झिल्ली पछाडि
यो स्वादिष्ट तरकारीले सामान्यतया सलाद वा रसको रूपमा खपत गर्दछ जब टोपिकली रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने यसले तपाईंको छालालाई जीवन्त बनाउन सक्छ, भिटामिन खनिजहरूको उपस्थिति, र एन्टिऑक्सिडन्ट र विरोधी भड़काउने गुणहरूको लागि धन्यवाद।  यस लेखमा, हामी तपाईंको छालाको चुकन्दरको विभिन्न फाइदाहरूका बारेमा कुरा गर्छौं र कसरी तपाईं आफ्नो स्किनकेयर रुटिनमा बीटरूट समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छौं कि छालाको लागि तरकारीको पूर्ण फाइदा लिनको लागि, तपाईंले यसलाई सामयिक रूपमा प्रयोग गर्नु अघि, प्रत्येक दिन एक गिलास चुकंदरको रसबाट सुरु गर्नुहोस्।
छालाका लागि चुकुनको फाइदाहरू
एक महान रगत शुद्धीकरण, अनुहारमा चुकुनको सामयिक अनुप्रयोगले विभिन्न छाला फाइदाहरू प्रदान गर्दछ जुन तल सूचीबद्ध छन्।
बीटरुटमा भिटामिन सीको उपस्थिति छालामा कोलेजेन उत्पादन सुधार गर्न र छालाको उपस्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यसले तपाईंको अनुहारमा प्राकृतिक चमक थप्यो।
यो एक्ने र blemishes को उपस्थिति कम गर्दछ।
यसले तपाईंको छाला उज्यालो पार्न मद्दत गर्दछ।
यसले छालाको लचिलोपनलाई सुधार गर्दछ ठीक लाइनहरू र झिम्काबाट मुक्त हुन।
यसले तपाईंको आँखा मुनि कालो घेरा घटाउँछ।
यसले तपाईंको छाला हाइड्रेट गर्दछ।
यसले तपाईंको ओठमा प्राकृतिक गुलाबी रंग दिन्छ।
बीटरुट फेस प्याक
१. गुलाबी चमकको लागि
अनुहारमा लगाईएको भरखरै पिग्मेन्ट बीटरूटले तपाईंलाई त्यो गुलाबी चमक दिन पर्याप्त छ। [दुई] थप, तरकारीको छाला-समृद्ध पार्ने गुणहरूले तपाईंको अनुहार पोषण राख्दछ।
बीटरूटलाई सानोमा काट्नुहोस् र यसलाई ग्रेरेट गर्नुहोस्।
ग्रेट गरिएको तरकारी अनुहारमा लगाउनुहोस्।
यसलाई १०-१-15 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
पछि यसलाई धुनुहोस् र तपाईं आफ्नो गालामा गुलाबी ब्लस देख्नुहुनेछ।
तपाईंको अनुहारमा प्राकृतिक गुलाब टिन्ट राख्न हप्तामा २- times चोटि यो प्याक प्रयोग गर्नुहोस्।
२. एक्नेका लागि
एक्ने छालाको अवस्था हो जुन हामी धेरैलाई दु: ख दिन्छ। अनुहारमा पोरहरू एक्ने पछाडि मुख्य कारणहरू हुन्। बीटरुट भिटामिन सी र एन्टिऑक्सिडन्टहरूको एक पावरहाउस हो जसले एक्नेबाट छुटकारा पाउनको लागि स्वतन्त्र कट्टरपन्थी क्षतिको विरूद्ध लड्दछ। [दुई] दहीले ल्याक्टिक एसिड समावेश गर्दछ जसले छालाको अनलग छाला pores पाउन र एक्ने कम गर्न छालालाई exfoliates गर्दछ। ]
२ चम्मच चुकन्दर जुस
एक कचौरामा, चुकन्दरको रस लिनुहोस्।
यसमा दही जोड्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् महीन टाँस्नका लागि।
तपाईंको अनुहारमा मिश्रण लागू गर्नुहोस्।
यसलाई १ minutes मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
पछि यसलाई कुल्ला।
उत्तम परिणामहरूको लागि यो प्याक हप्तामा १-२ पटक प्रयोग गर्नुहोस्।
Even. एक र complex प्राप्त गर्न
बीटरुटमा उपस्थित भिटामिन सी छालाको उपस्थिति सुधार गर्न छालामा कोलेजेन उत्पादन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। निम्बू को रस, एक उत्तम छाला उज्यालो एजेन्ट हो, आफ्नो छाला को एक समान टोन प्रदान गर्न सहयोग। ]
१ चम्मच चुकन्दर जुस
१ चम्चा नीबूको जुस
एउटा भाँडोमा, दुबै सामग्रीहरू मिलाउनुहोस्।
Skin. छाला-उज्यालो प्याक
भिटामिन सी समृद्ध सुन्तलाको बोक्रा पाउडरको साथ बृद्ध पार्ने बीटरूटलाई मिक्स गर्नुहोस् र तपाईंसँग अनुहार प्याक छ जसले तपाईंको छालालाई गहिरो सफा गर्छ, छालाको लोचलाई सुधार गर्दछ र तपाईंको छालालाई निखार पार्दछ। ]
१ चम्मच चुकन्दर रस
२ चम्मच सुन्तलाको बोक्रा पाउडर
एक कचौरामा, सुन्तलाको बोक्रा पाउडर पाउनुहोस्।
यसमा बीटरुटको रस थप्नुहोस् र राम्रो मिश्रण गर्नुहोस् एउटा महीन पेस्ट प्राप्त गर्न।
तपाईंको अनुहारमा टाँस्नुहोस्।
यो सुक्खा नभएसम्म यसलाई छोड्नुहोस्।
चिसो पानी प्रयोग गरेर यसलाई राम्ररी कुल्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो नतीजाहरूको लागि प्रत्येक अनुहार प्याक प्रयोग गर्नुहोस्।
Ble. दोषको लागि
टमाटरको जुसको बलियो एस्ट्रिन्जेन्ट गुणहरूसँग मिसाइएको बीटकोटको पौष्टिक गुणहरूले ती हठी दागहरूबाट छुटकारा पाउन यो एक अनुहार प्याक बनाउँदछ। ]
१ चम्मच टमाटरको जुस
यो दाग लागेको क्षेत्रहरूमा लागू गर्नुहोस्।
पछि यसलाई राम्ररी पखाल्नुहोस्।
उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न हप्तामा एक पटक यो प्याक प्रयोग गर्नुहोस्
Dark. अँध्यारो सर्कलहरूका लागि
बीटरुट एन्टिऑक्सिडन्टहरूको एक उत्कृष्ट स्रोत हो र यसले तेनि-आँखा क्षेत्र सुस्त बनाउन र पफनेस कम गर्न मद्दत गर्दछ। छालाका लागि उत्तम अमोलियन्ट, बदामको तेलमा भिटामिन ई र के हुन्छ जसले यसलाई एन्टीओक्सीडन्ट र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू प्रदान गर्दछ। यसले यसलाई अँध्यारो सर्कलहरूका लागि शक्तिशाली समाधान बनाउँदछ। ]
ब chicken्गालीमा कुखुराको डोसा प्यारा बनाउने विधि
बदामको तेल को दुई बूँदाहरू
यसमा बदामको तेल थप्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
तपाईंको आँखा मुनि मिश्रण लागू गर्नुहोस्।
करीव १ 15 मिनेट को लागी यसलाई छोड्नुहोस्।
पछि चिसो पानी प्रयोग गरेर यसलाई कुल्ला।
उत्तम परिणामहरूको लागि यो प्याक हप्तामा २- 2-3 पटक प्रयोग गर्नुहोस्।
Dry. सुक्खी छालाका लागि
चुकंदरको दूध र मिसाएर बदामको तेल मिसाएर सुक्खा छालाको दिक्क लागी एक उत्तम समाधान हो। दुधमा अवस्थित ल्याक्टिक एसिडले छालालाई यसको ओस नलगाई बाहिर निकाल्दछ। बदामको तेल अत्यधिक रमणीय छ र तपाईंको छालालाई हाइड्रेट राख्नको लागि अद्भुत घटक हो। ]
बदामको दुधका २- drops बूँदाहरू
यसमा दूध थप्नुहोस् र राम्रोसँग चलाउनुहोस्।
अन्तमा, बदामको तेलका थोपाहरू थप्नुहोस् र यसलाई राम्रो मिक्स दिनुहोस्।
O. तेल छालाका लागि
मुलतानी मिट्टीले तेल उत्पादन रोक्छ र अधिक तेल खाली गर्दछ। ] चुकन्दर ले छालालाई शान्त पार्न र छालामा हराएको चिसोलाई पुनः भर्नका लागि मद्दत गर्दछ।
१ चम्चा मुल्तानी मिट्टी
आधा बीटरूटलाई लगभग minutes मिनेट उमालेर पेस्ट प्राप्त गर्न यो मिश्रण गर्नुहोस्।
यसमा मुल्तानी मिट्टी जोड्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् महीन टाँस्नका लागि।
यसलाई पूर्ण रूपमा सुक्ने सम्म यसलाई छोड्नुहोस्।
यस अनुहार प्याक एक हप्तामा २- times पटक इच्छित परिणामका लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
The। छाला टोन गर्न
दूधमा मिसाएको बीट रसले तपाईंलाई अनुहार प्याक दिन्छ जसले तपाईंको छाला सफा गर्न मद्दत गर्दछ, छालाको प्वालहरू खोल्छ र तपाईंको छालालाई टोन गर्दछ।
एक कचौरामा, चुकुनको रस र दूध मिश्रण गर्नुहोस्।
करीव 30० मिनेट को लागी यसलाई छोड्नुहोस्।
एक हप्तामा २- times पटक यो प्याक प्रयोग गर्नुहोस् उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि।
१० डि-ट्यानिंग प्याक
बीटरूटले यसको सम्पन्न भिटामिन र ब्लीचिंग गुणहरूको साथ खट्टा क्रीमको साथ मिश्रित घामले सूर्य ट्यानलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई चम्किलो छाला दिन्छ।
१ चम्मच खट्टा क्रीम
बाउलमा, दुबै सामग्रीहरू मिक्स गर्नुहोस् महीन टाँस्नुहोस्।
यसलाई minutes० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
टाँस्नुहोस् र टाँस्नुहोस्।
उत्तम परिणामहरूका लागि हप्तामा दुई पटक यो प्याक प्रयोग गर्नुहोस्।
११. एंटी-एजिंग प्याक
बीटरुटमा उपस्थित भिटामिन सीले छालाको कोलेजेन उत्पादन सुधार गर्दछ र छाला कोषहरूको पुनर्जीवनलाई बढाउँदछ, ठीक रेखा र झिम्का कम गर्न। महमा एन्टिआक्सिडन्टहरू भरिएको हुन्छ जुन राम्रो लाइनहरू र झिम्काहरू घटाउन सहयोग गर्दछ। 
एक भाँडोमा बीटरोट क्रस गर्नुहोस्।
यसमा मह थप गर्नुहोस्।
मिश्रण प्रभावित क्षेत्रहरूमा लागू गर्नुहोस्।
यसलाई १-20-२० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
उत्तम परिणामहरूको लागि यस प्याकलाई हप्तामा १-२ पटक प्रयोग गर्नुहोस्।
रावा इडली तौल घटाउन को लागी राम्रो हो
कसरी भौं कपालको वृद्धि बढाउने
कसरी एक स्वस्थ र बुद्धिमान बच्चा प्राप्त गर्ने
शुभ दिन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुहरू किन्नको लागि
कसरी सेक्स बिना गर्भवती हुने